MINISITERAN’NY FANABEAZAM-PIRENENA : Ho hentitra ny fampidirana mpiasam-panjakana
“Ho henitra ny fanaraha-maso apetraky ny fitondrana amin’ny fampidirana mpiasam-panjakana eo amin’ny sehatry ny fampianarana. Voakasik’izany avokoa na ny fampianarana eny amin’ny ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izany na ny eo anivon’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena.” 15 avril 2019
Izay no nisongadina nandritra ny dian’ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tany Morondava tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Nandritra ity diany tany an-toerana ity ihany koa moa no nanolorany fitaovana manara-penitra ho an’ny ivon-toeram-pampianarana ambaratonga ambony iray tao Morondava.
Tsy vao izao ny Minisitra sy ny Minisitera roa izay tantanany no nanolotra fitaovana manara-penitra ho an’ny ivon-toerana tahaka ity tany Morondava ity fa efa nisy ihany koa ny fanolorana sy fizarana izany ho an’ny ivon-toerana tao Antsirabe. Fitaovana maro, manaraka ny fenitra ara-teknolojia toy ny solosaina sy ireo kojakoja maro hafa no natolotra tamin’izany. Nambaran-dRamatoa Minisitra, Profesora Rejo Fienena fa maro ny ezaka tsy maintsy atao hanatratrarana ny tanjona kendrena amin’ny fampiasana ny teknolojia vaovao eo amin’ny sehatry ny fampianarana manerana ny Nosy ka ny fanatanterahana izao fanomezana fitaovana raitra izao dia efa tafiditra tanteraka ao anatin’ny fampiharana izany.
Betsaka ny ezaka atao, hoy ramatoa minisitra amin’ny hisian’ny fangaraharahana amin’ny fampidirana ireo olona ho mpiasam-panjakana eo anivon’ireto minisitera ireto ka tsy maintsy ho hentitra ny fanaraha-maso apetraky ny fanjakana hiatrehana izany. Ankoatra izay dia nambarany ihany koa fa hampitomboina ny sampam-pianarana ambony manerana ny Faritra maro eto Madagasikara ho tombotsoan’ny mpianatra sy hamolavolana azy ireo ho olo-mendrika afaka miatrika asa avy hatrany aorian’ny fianarana rantoviny.